Doorashada Soomaaliya oo Puntland iyo Jubaland la’aantood Go’aan laga Gaadhay | Gaaroodi News
Doorashada Soomaaliya oo Puntland iyo Jubaland la’aantood Go’aan laga Gaadhay
August 21, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixaya heshiiska
Waxaa lasoo gabagabeeyay shirkii qaar kamid ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka uga socday magaalada Dhusamareeb ee xarunta Galmudug, halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku shirsanaayeen.
Shirkan oo qoddobada looga hadlay ay kasoo shaqeeyeen guddi farsamo oo ka kala socday maamul goboleedyada, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ay guddigaas maalmihii lasoo dhaafay ku shirsanaayeen magaalada Muqdisho, walow markii dambe ay tageen Dhusamareeb.
Madaxdii tagtay Dhusamareeb waxay shegeen in markii ay si qotodheer ay uga wadatashadeen qaababka doorasho ee ay soo jeediyeen guddigaas ay isla qaateen deegaan doorasho, waxaana qoddobadii shirka kasoo baxay kamid ahaa:
1. In qaabka doorashada 2020/21 noqoto mid deegan doorasho ah
2. In guddiga madaxabannaan ee doorashooyinka qaranka oo kaashanaya maamulada dowlad goboleedyada fududeeyan dhisida guddi xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee ka soo jeeda beesha wadaagta kursiga.
3. In ergada kursi kasta noqoto 301 oo ka imaneysa beesha kursiga wadaagta.
5. In codbixiyeyaasha 3-dii ilaa 5tii kursi ee hal goob doorasho wada yaalla la isku dhafo kadibna si wadajir ah ugu codeeyaan dhammaan musharaxiinta xisbiyada ee ku tartamaya kuraastaas.
7. Guddiga madaxabanaan ee doorashooyinka qaranka waxay kuraasta lagu asteeyey deegaan doorashooyin aan amni ahayn u wareejin karaan deegaan doorasho kale oo amni ah.
11. In Baarlamaanka dowlad goboleedyadu doortaan xubnaha Aqalka Sare.
13. Si doorashada wakhtigeeda ugu dhacdo waxaa la go’aamiyey in guddiga madaxbanaan ee doorashooyinka uu dardargaliyo hirgelinta doorashada.
14. Madaxda shirka waxa ka go’an in ay sii wadaan dadaalka xal u helida tabashooyinka ku aadan arrimaha doorashooyinka 2020/21 ee ay qabaan labada dowlad goboleed ee shirka ka maqan.
Shirkan oo aysan kasoo qeybgelin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa qodobada kasoo baxay waxaan la ogeyn sida ay uga falcelin doonaan nooca doorasho ee lagu heshiiyay.
Dhanka kale dowladda Mareykanka oo horay u sheegtay inay aad uga war dhowreyso waxa kasoo bixi doona shirka Dhusamareeb 3 ayaa war kooban oo lagu daabacay bogga Twiter ee safaaradda Mareykanka ee Muqdisho waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu ka shaqeeyay sidii aragti loo dhan yahay loo geyn lahaa wadahadalada Dhusamareeb.
Safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in aanay caawin karin kuwa ka maqan shirka.
Dad uu ku tilmaamay inay yihiin qaswadayaal ragaadinaya ka qeybgalka shirka ayuu Mareykanka sheegay inay ku gorgortamayan dimquraadiyadda iyagoo buu yiri eeganaya damacooda gaarka ah. Madaxda ku shirtay Dhusamareeb
Sidoo kale dhinacyada ka qeybgalaya shirka ayuu sheegay inay u baahnaan doonaan inay horay u socdaan, ayna isku waafaqaan nooc doorasho oo wakhtigeeda ku dhacda, taas oo saacado kadib warka soo baxday.
Magaalada Dhusamareeb ayaa waxaa maalmahanba ku shirsanaa madaxda maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeele, guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweynaha Galmudug oo martigelinaya shirka iyo Madaxweynaha dowladda federaalka , kuwaas oo maalmahanba ka war sugayay in shirka ay yimaadaan maamulada Puntland iyo Jubaland oo la aaminsan yahay in tabasho ay ka qabaan dowladda federaalka aanay uga qeybgelin shirka.
Inkastoo shirkan kii ka horeeyay loo maleynayay in labada dhinac ay isu soo dhawaadeen ayaa haddana waxaa muuqata in nooca doorashada ee Dhusamareeb looga dhawaaqay uu waafaqsan yahay tii markii hore ay soo jeediyeen maamul goboleedyada.
Muxuu gabagabadii shirka ka yidhi madaxweyne Farmaajo?
Gabagabadii shirka waxaa khudbado jeediyay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur-Galbeed, Hir-shabeelle, Gal-mudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Dhammaan madaxdu waxay ka hadleen sida loogu baahan yahay hirgalinta qodobbadii kasoo baxay kulanka.
Madaxweynaha dowladda Federaalka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa ugudambeyn soo gabagabeeyay shirka, wuxuuna u mahad celiyay dhammaan madaxdii toddobada casho ku sugnaa kulanka Dhuusamareeb.
Wuxuu madaxweynuhu sheegay in dhinacyada ay aad u kala mowqif duwanaayeen.
“Waxaan isu jirnay dhulka iyo cirka, xaqiiqatan. Iyagu waxay taagnaayeen inay wax soo xulaan – oo waliba lambarkii 51-da ahaa hoos uga dhacaan, qaarkoodna ay yiraahdeen ‘maxaan madaxweyne u ahay haddii aanan waxba soo xuleynin’, anigana meeshii aan joogay waa la ogaa. Xaqiiqatan Alle wuu na tusay wixii aan u arkeynay inuu xal ahaa,” ayuu yidhi Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ka codsaday madaxda maamul goboleedyadii ka maqnaa shirka inay aqbalaan go’aannada soo baxay.
“Walaalaheen qaar ayaa ka maqnaaday shirka, runtiina aan rabo inaan uga mahadceliyo dadaalkii ay horay u sameeyeen, haddana aan ku dhiirrigalinayo inay nagu raacaan go’aannada aan soo qaadannay. Waa go’aanno aan dalkoo dhan u qaadnay, iyagana aan u qaadnay, maadaama waqti uu nagu socdo, intaas in ka badanna aannaan sugi karin.” Ayuu yidhi madaxweynaha dowladda federaalka.